Deputy Minister for Hotels and Tourism U Htay Aung makes opening speech at the opening ceremony of the work shop for Tourism Best Practice Guidelines Cartoon Project supported by Hanns Seidel Foundation | Tourism Latest News
← Deputy Minister for Ministry of Hotels and Tourism attends closing ceremony of Customer Service Course (6/2012)
Mr. Dhierry Graff, Executive Producer for French-based TF 1 TV channel and Mr.Gerard Chesnel meet Deputy Minister →
Posted on June 29, 2012 by admin	Nay Pyi Taw, June 29
Developing the draft policy for responsible tourism with the support of the Germany based Hanns Seidel Foundation; Tourism Best Practice Guidelines will be illustrated by cartoons and distributed in booklets. Opening of the working session for this project was held at the Amara Hotel in Nay Pyi Taw Hotel Zone and Deputy Minister for Ministry of Hotels and Tourism U Htay Aung delivered the opening address.
In his address, Deputy Minister said Ministry of Hotels and Tourism was successfully held the Responsible Tourism workshops in Nay Pyi Taw from February 21 to 23, 2012 at Myanmar International Convention Center. Master Plan for Myanmar Tourism is also implementing with the assistance of Norwegian Government and Asian Development Bank. The Ministry is working with the tourism related Ministries and private sector to raise awareness of responsible tourism concepts among the industry stakeholders and put its most sound principles into practice.
This project is interesting that tourism best practice guidelines illustrated by cartoons. The Ministry has also published and distributedabooklet called “A guide to travel in the Union of Myanmar “. In this booklet, we put the subtitles such as religious customs, cultural norms, guidelines for safety and security, visiting villages, custom duty, antiquities, lodging, minors (children), and means of transport, foreign exchange and environmental protection, wildlife protection, preservation and conservation of historical heritage and economic impact on the local community. Deputy Minister also said, nothing is perfect and it is also needed to add in accord with the prevailing circumstances.
After that, Dr. Andre Valentin, tourism consultant from Germany explained the publishing of the cartoon booklets with power point presentation.
Also present the occasion with the Deputy Minister were Managing Director of Myanmar Hotels and Tourism Services and senior officials and responsible persons from Myanmar Tourism Federation, Nay Pyi Taw Hotel Zone and tourism related ministries.
ဂျာမဏီနိုင်ငံအခြေစိုက် Hanns Seidel Foundation ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် Tourism Best Practice Guidelines- Cartoon Project လက်စွဲစာစောင်ပုံစံစာအုပ် ထုတ်ဝေနိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား (နေပြည်တော်၊ ဇွန်-၂၉ ရက်)
ဂျာမဏီနိုင်ငံ အခြေစိုက် Hanns Seidel Foundation ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် Draft Responsible Tourism Policy ကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိရာ နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ် တစ်ရပ် အနေဖြင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Dr Ms. Andrea Valentin သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ကျင့်သုံးရန်လမ်းညွှန်ချက်များ (Do’s & Don’ts) ကာတွန်းပုံစံဖြင့် သရုပ်ဖော်မည့် Tourism Best Practice Guidelines- Cartoon Project လက်စွဲပုံစံစာအုပ် ထုတ်ဝေနိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ယနေ့ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီအချိန် တွင် နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန် အမရဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဌေးအောင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ၀န်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ဂျာမဏီနိုင်ငံ Hanns Seidel Foundation ၏အကူအညီဖြင့် တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက်မှ (၂၃)ရက်အထိ MICC တွင် ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပင်မစီမံကိန်း(မူကြမ်း)ရေးဆွဲရေးကိုလည်း နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့၏ အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း အနေဖြင့်လည်း အခြား ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍများနှင့် လက်တွေ့ကျကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုကျင်းပပြုလုပ်သည့် Tourism Best Practice Guidelines- Cartoon Project သည် အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် လက်စွဲစာစောင် တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ၄င်းလက်စွဲစာအုပ်ကို “ A Guide To Travel In The Union of Myanmar” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး လက်စွဲစာစောင် ကို ခေါင်းစဉ်ငယ်များခွဲထားမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ခေါင်းစဉ်များတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ များ၊ ကျေးရွာများသို့လည်ပတ် သည့် ခရီးစဉ်များ၊ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကိစ္စများ၊ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ယာယီတည်းခိုရာများတွင် နေထိုင်စဉ်များ၊ ခရီးစဉ်အလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကိစ္စရပ်များ ၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အပြင် ထပ်မံထည့်သွင်းရန်လိုအပ်မည့် အခြား သင့်လျော်သည့်အချက်များကိုလည်း မွမ်းမံပြင်ဆင် ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း မှာကြားသည်။
၄င်းနောက် ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Dr Ms. Andrea Valentin မှ Tourism Best Practice Guidelines – Cartoon Project လက်စွဲစာစောင်ပုံစံစာအုပ် ထုတ်ဝေနိုင်ရေး အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို Powerpoint Presentation ဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှဌေး နှင့် တာဝန်ခံအရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၊ နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်၊ အခြား ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.	← Deputy Minister for Ministry of Hotels and Tourism attends closing ceremony of Customer Service Course (6/2012)